Venezuela: Maduro oo qaadacay codsi uga yimid EU-da • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Venezuela: Maduro oo qaadacay codsi uga yimid EU-da
Venezuela: Maduro oo qaadacay codsi uga yimid EU-da
February 4, 2019 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa qaadacay hanjabaad uga timid qaar kamid ah dalalka Midowga Yurub oo ugu baaqay xukuumada Venezuela inay qabato doorashooyin cusub.
Wadamada Midowga Yurub ayaa 7 kamid ah u qabtay Maduro inuu ugu danbeyn Axadii shalay uu aqbalo codsigooda, iyagoo sheegay hadii ay dowlada Venezuela diido codsigooda ay iyaguna dhankooda aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaridka ahna Guddoomiyaha Baarlamaanka Venezuela oo sheegtay inuu isagu yahay Madaxweynaha kumeel gaarka ah.
Nicolas Maduro ayaa sheegay inuusan aqbali karin farogelinta iyo in wadamo kale ay u yeeriyaan in dib loo qabto doorasho kale, wuxuuna sheegay in qaabka ay u dhaqmayaan qaar kamid ah dalalka Yurub sidii xiligii Gumeystaha.
Mucaaridka Venezuela ayaa horey taageero uga heystay dalka Maraykanka oo si weyn u abaabulaya in xilka laga tuuro Nicolas Maduro. Balse Maduro ayaa weli taageero ka heysta qaar kamid ah dalalka caalamka sida Ruushka, China, Mexico, Turkiga, Iran, iyo dalal kale oo badan.